3 kumatshini oomatshini abazisebenzelayo abasebenza ngo-1 kumatshini wokushicilela
Inkcazo:I-3 kwi-1 yeeStrawithi zeNkxaso,I-Coil Straightener kunye neNkqubo ye-Uncoiler,Reel ngqoener feeder, Izibonelelo zeServo ngeStrightight,Ungayisebenzisi le feed yomthengisi, Izixhobo Zokuhlanganisa
Home > Imveliso > Umxhasi weCoil Straightener > Umxhasi we-Uncoiler Straightener feeder
Iintlobo zeMveliso ze- Umxhasi we-Uncoiler Straightener feeder , singabakhiqizi abakhethiweyo baseChina, I-3 kwi-1 yeeStrawithi zeNkxaso , I-Coil Straightener kunye neNkqubo ye-Uncoiler ababoneleli / umkhiqizo, iimveliso eziphezulu zexabiso eliphezulu ze-R & D kunye nokuvelisa, sinemisebenzi epheleleyo emva kokuthengisa kunye nenkxaso yobuchwepheshe. Khangela phambili ekusebenzisaneni kwakho!
Ukondla ngokuLuqilima kuZalisa iiNxalenye zoMbane  Qhagamshelana Ngoku
Imigca yokudlula iikhoyili yokucinezela koomatshini bokushicilela  Qhagamshelana Ngoku
I-Coil yoMxhasi-oLungelelanisa iiCombos  Qhagamshelana Ngoku
Iimveliso kunye neMveliso yokuPhatha iikhoyili  Qhagamshelana Ngoku
Ukuhambisa isiXhobo isiXhobo soGuquguquko Izixhasi zerhasi  Qhagamshelana Ngoku
Umxhasi weCoil Straightener Umxhasi oshicilelweyo wokuSitampu seSinyithi  Qhagamshelana Ngoku
IServo Coil Straightener yeMxhasi  Qhagamshelana Ngoku
Umxhasi we-Servo oMdibanisayo weServerightener  Qhagamshelana Ngoku
Umgca we-compact 3 Ku-1 (Uncoiler-Straightener-feeder)  Qhagamshelana Ngoku
Umtya okondla iikhoyili kwishishini leemoto  Qhagamshelana Ngoku
Kwi-1 kwi-1 Straightener-Okondla nge-Decoiler  Qhagamshelana Ngoku
Isithathu kwisibonelelo esinye esizenzekelayo  Qhagamshelana Ngoku
Iphepha leMeta Metal Straightener feeder  Qhagamshelana Ngoku
Intsimbi ye-Metil Coer Press Line  Qhagamshelana Ngoku
I-3 kwi-1 iServo Straightener Isondli kunye ne-Uncoiler  Qhagamshelana Ngoku
Inkqubo yokutyisa yokucinezela ye-NC leveler feeder  Qhagamshelana Ngoku
Inkqubo yokuNgqinisisa Isinikezeli Esilungisiweyo  Qhagamshelana Ngoku
Ukondla ngokuLuqilima kuZalisa iiNxalenye zoMbane
UNCOI LING nokolula Iintlawulo ding ezigexa Electric Lo ngumtya wokudibanisa compact, kunye ne-decoiler, i-straightener kunye nomatshini wokudibanisa kwiiyunithi zokudibanisa enye. ebizwa ngokuba yi-feeder-straightener, ebekwe ngqo kumaphephandaba,...
Imigca yokudlula iikhoyili yokucinezela koomatshini bokushicilela
CO I L I- FE FE LIN ES FO R STA MPING PER SSES Lo ngumtya wokudibanisa compact, kunye ne-decoiler, i-straightener kunye nomatshini wokudibanisa kwiiyunithi zokudibanisa enye. ebizwa ngokuba yi-feeder-straightener, ebekwe ngqo kumaphephandaba,...
I-Coil yoMxhasi-oLungelelanisa iiCombos
CO IL FEEDER-STRAIGHTENER I-COMBOS Lo ngumtya wokudibanisa compact, kunye ne-decoiler, i-straightener kunye nomatshini wokudibanisa kwiiyunithi zokudibanisa enye. ebizwa ngokuba yi-feeder-straightener, ebekwe ngqo kumaphephandaba, isithuba...
Iimveliso kunye neMveliso yokuPhatha iikhoyili
ITHISA ABANTU AN D CO IL IMVELISO anganika Lo ngumtya wokudibanisa compact, kunye ne-decoiler, i-straightener kunye nomatshini wokudibanisa kwiiyunithi zokudibanisa enye. ebizwa ngokuba yi-feeder-straightener, ebekwe ngqo kumaphephandaba, isithuba...
Ukuhambisa isiXhobo isiXhobo soGuquguquko Izixhasi zerhasi
Sokunyathela EQUIP kuqonda ubukho SER CO IL baba- IMALI Lo ngumtya wokudibanisa compact, kunye ne-decoiler, i-straightener kunye nomatshini wokudibanisa kwiiyunithi zokudibanisa enye. ebizwa ngokuba yi-feeder-straightener, ebekwe ngqo...
Umxhasi weCoil Straightener Umxhasi oshicilelweyo wokuSitampu seSinyithi
CO IL STRAIGHTENER IMALI DER zilinganisiwe PHAMBI SS FOR METAL sokunyathela Lo ngumtya wokudibanisa compact, kunye ne-decoiler, i-straightener kunye nomatshini wokudibanisa kwiiyunithi zokudibanisa enye. ebizwa ngokuba yi-feeder-straightener, ebekwe...
IServo Coil Straightener yeMxhasi
INKONZO YENKONZO YENKONZO YENKONZO YENKONZO YENKONZO Lo ngumtya wokudibanisa compact, kunye ne-decoiler, i-straightener kunye nomatshini wokudibanisa kwiiyunithi zokudibanisa enye. ebizwa ngokuba yi-feeder-straightener, ebekwe ngqo kumaphephandaba,...
Umxhasi we-Servo oMdibanisayo weServerightener
SERVO IMALI DER STRAIGHTENER DE COILER Lo ngumtya wokudibanisa compact, kunye ne-decoiler, i-straightener kunye nomatshini wokudibanisa kwiiyunithi zokudibanisa enye. ebizwa ngokuba yi-feeder-straightener, ebekwe ngqo kumaphephandaba, isithuba...
Umgca we-compact 3 Ku-1 (Uncoiler-Straightener-feeder)
IPHEPHA LOKUVELA E-3 KWingu-1 (NGENXA YOKUGQIBELA YOKUZIPHATHA) Lo ngumtya wokudibanisa compact, kunye ne-decoiler, i-straightener kunye nomatshini wokudibanisa kwiiyunithi zokudibanisa enye. ebizwa ngokuba yi-feeder-straightener, ebekwe ngqo...
Umtya okondla iikhoyili kwishishini leemoto
UKUXELWA KWEXESHA LOKUFUMANEKA KWEZOBUCHULE Lo ngumtya wokudibanisa compact, kunye ne-decoiler, i-straightener kunye nomatshini wokudibanisa kwiiyunithi zokudibanisa enye. ebizwa ngokuba yi-feeder-straightener, ebekwe ngqo kumaphephandaba, isithuba...
Kwi-1 kwi-1 Straightener-Okondla nge-Decoiler
3 KWI-1 STRAIG HTENER-FEEDER W ITH DEC OILER Lo ngumtya wokudibanisa compact, kunye ne-decoiler, i-straightener kunye nomatshini wokudibanisa kwiiyunithi zokudibanisa enye. ebizwa ngokuba yi-feeder-straightener, ebekwe ngqo kumaphephandaba, isithuba...
Isithathu kwisibonelelo esinye esizenzekelayo
EZINTATHU IN O NE uMondli EZIZENZEKELAYO Lo ngumtya wokudibanisa compact, kunye ne-decoiler, i-straightener kunye nomatshini wokudibanisa kwiiyunithi zokudibanisa enye. ebizwa ngokuba yi-feeder-straightener, ebekwe ngqo kumaphephandaba, isithuba...
Iphepha leMeta Metal Straightener feeder
UXWEBHU ME tal STRAI GHTENER uMondli Lo ngumtya wokudibanisa compact, kunye ne-decoiler, i-straightener kunye nomatshini wokudibanisa kwiiyunithi zokudibanisa enye. ebizwa ngokuba yi-feeder-straightener, ebekwe ngqo kumaphephandaba, isithuba...
Intsimbi ye-Metil Coer Press Line
IMFUYO YOKUZIPHATHA KWEXESHA LOKUFUNDA I- ESS LINE I-Metal Coil feeder Line Line ikwindawo emfutshane yoyilo lwenzelwe ukujongana neemfuno zabathengi ezingenasithuba saneleyo. Banikezela ukuthembeka kwenkqubo nakwizixhobo ezifuneka kakhulu....
I-3 kwi-1 iServo Straightener Isondli kunye ne-Uncoiler
I-3 KWI-1 YENKONZO YENKONZO YOBUCHULE NGE- UNC OILER I-3 kwi-1 iServo Straightener feeder ene-Uncoiler ikwindawo emfutshane yoyilo lwenzelwe ukujongana neemfuno zabathengi ezingenasithuba saneleyo . Banikezela ukuthembeka kwenkqubo nakwizixhobo...
Inkqubo yokutyisa yokucinezela ye-NC leveler feeder
I-PRESS F EED ING SYSTEM N C LEV ELER FEEDER Inkqubo yokutyisa ye-NC leveler feeder ikwindawo emfutshane yoyilo lwenzelwe ukujongana neemfuno zabathengi ezingenasithuba saneleyo. Banikezela ukuthembeka kwenkqubo nakwizixhobo ezifuneka kakhulu....
Inkqubo yokuNgqinisisa Isinikezeli Esilungisiweyo
ISICWANGCISO SOKUJONGA EMVA KWEEMFUNO EZIZODWA Coil Servo Straightener Okondlayo kwisakhiwo esikufutshane uyilo lwenzelwe ukujongana neemfuno zabathengi ezingenasithuba saneleyo. Banikezela ukuthembeka kwenkqubo nakwizixhobo ezifuneka kakhulu....
KwiChina Umxhasi we-Uncoiler Straightener feeder Abaxhasi
Umxhasi we-Uncoiler Straightener feeder une-Decoiler Straightener NC Servo Roll feed yeCoil Feeding Line ngoko ke iyakwazi ukusebenza kwi-thickness ukusuka kwi-0.6 mm ukuya kwi-6.0mm ngobubanzi obuqala ukusuka kwi-70 ukuya kwi-1800mm kunye nobunzima obufikelela kuma-20tons kuxhomekeka kwiimfuno zomthengi okhethekileyo. Iindidi zezinto ezinokusetyenziswa ngomatshini, ukusuka kwizinto ezithambileyo ezinjenge aluminium kunye neealloys, ukuya kushushu kwaye kubanda-kungqengqa izinto kunye nekharbon kunye nentsimbi engenasiphene, kunye nezixhobo ezinamandla aphezulu kunye nentsimbi yesililo.
Isongezo se-Uncoiler Straightener, kunye neDoiler, umatshini othe ngqo kunye nomatshini wokudibanisa kwiiyunithi zokudibanisa. Isebenzisa ukukhulula i-strip ytsimbi ukusuka kwi-coil stock, ukuyilungisa ngokukhawuleza ifuneke kwaye iyondla ukuze icinezele umshini wokuprinta.Isiqhelo kumzimba obotshelelwe kakuhle kunye nesakhiwo sothungelwano lwangaphambili, inokuphatha ngokulula isitokhwe sekhoyili ukuya kwi-20tons.
Ngemoto ye-YASKAWA servo kunye nokuqhuba kunye neMITSUBISHI PLC, umgca wokutya ungafezekisa ukutya okuchanekileyo ± 0.15mm. Ngapha koko, yonke inkqubo yokutya icompact ibubude obuyi-4.5m kuphela, oya kuthi ugcine indawo yokusebenzela eninzi kwiworkshop yakho.
Uncoiler Straightener uMondli ilungele kushishino lweemoto, ishishini sixhobo ekhaya, zemisebenzi yecandelo lokwakha, ikhompyutha kunye nezombane kushishino, hardware kunye nentsimbi kushishino bexhentsa kwaye njl Izahlulo njengoko amalungu Structural omzimba imoto kunye nezinye iindawo ezifana izisuli, detox waqhekeza, Tie Bar, umBoniso weSilayidi Rail YeSitulo seZithuthi, iifestile zombane, iiradiyo, iilokhwe, iziseko zesitulo, izihlalo zebhokisi yegiya, amavili, ukuxhaswa kwamanqwanqwa, izikhuselo, imingxunya, izitshixo, iminyango kunye neminyango, iingcango zecarpenter, izixhaso zensimbi, iipleyiti ezihlanjululweyo, iiglasi zemoto, iingcango , iitreyi, izikhombisi, iilokhwe, inkxaso, iibrakethi, izibambo, izindlu, iipaneli, iibakaki, iinyawo, iingalo, amaqhosha, i-diffusersa njl.
I-3 kwi-1 yeeStrawithi zeNkxaso I-Coil Straightener kunye neNkqubo ye-Uncoiler Reel ngqoener feeder Izibonelelo zeServo ngeStrightight Ungayisebenzisi le feed yomthengisi Izixhobo Zokuhlanganisa I-3 kwi-1 yeeStrawithi zeAdoves I-3 kwi-1 uNc Servo Straightener